Truth be known: သတိပေးလိုက်ပြီ
စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ကို ထောက်ခံနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရတွေကို သတိပေးလိုက်ပါပြီ။ စစ်သည်တော်တို့ရဲ့ ကြေငြာချက်ကို ယနေ့မြန်မာမှာ ဖတ်ပါ။
စစ်သွေးကြွတယ်ပဲ ပြောပြော၊ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေ အားပေးတယ်ပဲ ဆိုဆို၊ ကျနော်ကတော့ သူတို့ကို သဘောကျတယ်။ ဟိုး ၁၉၉၉ ဗန်ကောက် ဗမာသံရုံးဝင်စီးတည်းက သူတို့ လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံတယ်။ တော်ရုံလူတွေ မလုပ်ရဲတဲ့ စွန့်လွှတ်စွန့်စားတဲ့သတ္တိနဲ့ လုပ်ခဲ့ကြလို့ ဗမာ့အရေးကို နိုင်ငံတကာက ပိုသတိထားမိစေတယ်။ ဗမာသံရုံးပေါ်မှာ ခွပ်ဒေါင်းအလံ တလူလူပျံနေခဲ့တာကို အမှတ်ရနေတုန်းပဲ။
သူတို့ဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ မဟုတ် ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရက ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ ရဟတ်ယာဉ်နားထိလိုက်သွားခဲ့ရတဲ့ ဓားစာခံတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီရစေကြောင်း သူတိုတတွေကို အောင်မြင်စေကြောင်း နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ကျောင်းသားစစ်သည်တော်တွေကို အကြမ်းဖက်သမား မဟုတ်မှန်း သက်သေဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက အမှတ်တရ ပုံတွေ သတင်းတွေ ဒီမှာ ရှိပါတယ်။
အခုတော့ ဗုံးတွေခွဲနေပါလားလို့ ဆိုရင်တော့ သူတို့တွေ ပြောသလိုပဲ လုပ်သင့်တာလုပ်တာလို့ပဲ ကျနော်မြင်တယ်။ တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပေးဆပ်ရတာတွေတော့ရှိကြတာပါပဲ။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေမသေစေချင်ပေမယ့် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှရင်တော့ အထိအခိုက်ရှိမှာပါ။ ဘာပဲပြောပြော ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရင်တောင်မှ အသက်အန္တရာယ်ရှိသေးတာပဲလေ။
အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီ။ နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားတို့တောင်မှ နောက်ဆုံးမှာ လူဖြူအစိုးရကို အကြမ်းမဖက်နည်းရော၊ အကြမ်းဖက်နည်းရော သုံးခဲ့ကြရသေးတာပဲ။ ကျနော်တို့တွေလည်း လုပ်တာတရားပါတယ်။ သူနှိပ်စက်တာချည်း ငြိမ်ခံနေတာထက် နှိပ်စက်တဲ့လူတွေကို ပြန်နှိပ်စက်တာ လုံးဝ တရားတယ်။ သူတို့တွေ အေးအေးချမ်းချမ်း မနေနိုင်အောင်လုပ်တာ တရားတယ်။ ကပ်ဖားရပ်ဖားတွေ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ မနေနိုင်အောင်လုပ်တာ တရားတယ်။
Posted by generation96 at 10:47 AM
Labels: History, Warning
6:59 AM, February 02, 2007
Armed revolution is totally required for Burma democratization coz we like hero and ppl r waiting for the hero from Heaven to help them.
ဂန္ဓာလရာဇ် မှတ်တမ်း - ၂
ဂန္ဓာလရာဇ် မှတ်တမ်း - ၁
The controversial quote: “The people get the gover...
US Army officer seen at KNU leader's funeral